My freedom: လေတံခွန်
ကန်ဒီပျောက်နေတာ နည်းနည်းကြာသွားတယ်။ တရုတ်နှစ်ကူးပြီးရင် ဆေးခန်းမှာ လူနာတွေအရမ်းများတာ ထုံးစံပဲလေ။ အိမ်ကိုနောက်ကျမှ ပြန်ရောက်ပြီး ပင်ပန်းတော့ ရေးစရာပိုစ့်လေးရှိနေတာတောင် မရေးဖြစ်ဘူး။ နှစ်ကူးတုန်းက အလုပ်ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Marina Barrage မှာ စွန်သွားလွှတ်ကြတယ်။ ဒီနေ့မှ အဲ့တုန်းက ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်မလို့ ^_^
Marina Barrage ကို လွန်ခဲ့တဲ့(၄)နှစ်လောက်တုန်းက တစ်ခါရောက်ပြီး ဒါဒုတိယအကြိမ် ပြန်ရောက်တာပဲ။ Marina Bay ကနေ ကားတစ်ဆင့်ပြန်စီးရတယ်။ ကန်ဒီ့ဘလော့ဂ်မှာ သူများပုံတွေတင်တာနည်းပေမယ့် ဒီပုံလေးကတော့ သူတို့ပြုံးနေတာလေးတွေ အသက်ဝင်လို့ အရမ်းကြိုက်တာနဲ့ တင်လိုက်တယ်နော် ^_~
"Kites rise against the wind, not with it." -Tony Robbins
ကန်ဒီ့အဘိုးနဲ့ပက်သက်ပြီး ကန်ဒီစိတ်ထဲ မှတ်မှတ်ရရရှိနေတာ စွန်လွှတ်တာနဲ့ ဒူးရင်းယို နှစ်ခုပဲ။ ကန်ဒီတို့ အဘိုးအဘွားတွေက ကန်ဒီတို့ငယ်ငယ်လေးထဲက ဆုံးပါးသွားကြတော့ သူတို့နဲ့ပက်သက်ရင် ဘာမှသိပ်မမှတ်မိဘူး။ ငယ်ငယ်က ကန်ဒီကျောင်းကပြန်လာတာနဲ့ အိမ်စာတန်းလုပ်ရပြီး အိမ်စာပြီးမှ အဘိုးကစွန်လွှတ်ပြတယ်။ ကလေးဆိုတော့ ဆော့ချင်တာနဲ့ အိမ်ရောက်တာနဲ့ အ၀တ်တောင်မလဲဘဲ အိမ်စာတန်းလုပ်တော့တာပဲ ဟဟဟ xD
ဒီနောက်ပိုင်း အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်လာတာနဲ့ Planner လေး တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။ ခေါင်းထဲမှာ တန်းစီပြီး မမှတ်နိုင်တော့လို့။ ညဘက်ဆို မနက်ဖြန်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေ ချရေးတယ်။ အလုပ်သွားရင် အဲ့ဒီ Checklist လေးကို စာရွက်သေးသေးလေးထဲ ပြန်ကူးသွားတယ်။ စာရွက်သေးသေးလေးဆို အလုပ်က ကန်ဒီ့ကုတ်အကျီ အိတ်ကပ်ထဲထည့်ဖို့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ ကိုယ်လိုတဲ့အချိန် ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ Planner ကိုတော့ အိမ်မှာပဲ ထားခဲ့တယ်။ နောက်ကြုံမှ ကန်ဒီ့ Planner လေးပြမယ်(^_^)။ မနက်ဖြန်ကျရင် နောက်အပတ်ထဲမှာ ကန်ဒီပေးရမယ့် Training အတွက် ပြင်ဆင်ရဦးမယ်။ ပိတ်ရက်လေးတစ်ရက်မှာ အဲ့အလုပ်ကိစ္စ စဉ်းစားရတာလောက် စိတ်ညစ်တာမရှိဘူး >.<
ဒီနောက်ပိုင်းတွေ အလုပ်ကို ကန်ဒီထမင်းဗူးလေး ထည့်ထည့်သွားတယ်။ အမေ့ကို သတိရလို့လည်း ပါတယ်။ အမေရှိနေတဲ့(၂)လလုံးလုံး အပြင်ထွက်မစားတော့ အပြင်ထွက်စားရမှာ ပျင်းသွားတာရောပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖြစ်သလိုထည့်သွားတာလေးက အပြင်မှာဝယ်စားတာထက်တော့ စားလို့ပိုကောင်းတယ်။ ကန်ဒီ့ပါးစပ်ကလည်း မြန်မာပါးစပ်ဆိုတော့ မြန်မာလိုချက်ရင်ကို သူ့အလိုလိုဟင်းကကောင်းနေတာ ဟဟ xD
Happy Weekend Ahead Everyone^^
ဘိုစာကြီးစားမဲ့အစားထမင်းလေးဆီဆမ်းနဲ့ ကြုံ၇ာထဲ့သွားတာကမှစားလို့ ကောင်းသေးတယ်။
လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ check လုပ်ပစ်လုိုက်တယ်။
Keep on fighting Candy! May luck be always with you! Wish you all the best!!! :)
GGPa is looking at the sky